Yesu Ne “Nkwa Paanoo No” | Yesu Asetena
KENKAN WƆ Alur Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Lingala Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Maltese Mauritian Creole Maya Moore Myanmar Norwegian Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Uruund Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray
Yesu Ne “Nkwa Paanoo No”
YESU NE “PAANOO A ƐSIANE FIRII SORO NO”
Bere a Yesu wɔ Galilea Po no agya wɔ Betsaida mpɔtam hɔ no, ɔyɛɛ anwonwade maa nnipa mpempem aduane dii, na bere a wɔyɛɛ sɛ wɔrebɛfa no akɔsi no hene no, ɔdwanee. Saa anadwo no ara ɔnantee po so, na bere a Petro nso nam po so a ehu nti anka ɔremem no, Yesu gyee no. Afei ɔsan maa mframa yɛɛ dinn. Sɛ wanyɛ saa a, anka ebia nsuo faa n’asuafo no.
Afei deɛ na Yesu asan atwa aba Kapernaum mpɔtam hɔ. Wɔn a ɔmaa wɔn aduane dii no kɔhuu no, na wɔbisaa no sɛ: “Berɛ bɛn na wobaa ha?” Yesu kaa wɔn anim, na ɔma wɔhuu sɛ di a wɔdi n’akyi nyinaa, aduane na wɔrepɛ adi. Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monnyɛ aduane a ɛsɛeɛ ho adwuma, na mmom monyɛ aduane a ɛtena hɔ de kɔ daa nkwa mu” ho adwuma. Enti wɔbisaa no sɛ: “Ɛdeɛn na yɛnyɛ na yɛayɛ Onyankopɔn nnwuma?”​—Yohane 6:​25-​28.
Ná ɛyɛ wɔn sɛ gyama Mmara no mu nnwuma na Yesu reka ho asɛm, nanso na ɔreka biribi foforo koraa ho asɛm. Nnwuma a ɔkaa ho asɛm no, na ɛkyɛn Mmara no mu de no. Ɔkaa sɛ: “Yei ne Onyankopɔn adwuma sɛ mobɛgye deɛ Onii no somaa no no adie.” Nanso nea Yesu yɛe nyinaa nkurɔfo no annye no anni. Wɔkaa sɛ ɔnyɛ sɛnkyerɛnne bi ansa na wɔagye no adi. Enti wɔbisaa no sɛ: “Ɛdeɛn sɛnkyerɛnne na wobɛyɛ? Yɛn agyanom dii mana wɔ serɛ so sɛdeɛ wɔatwerɛ sɛ, ‘Ɔmaa wɔn paanoo firi soro diiɛ.’”​—Yohane 6:​29-​31; Dwom 78:24.
Bere a nkurɔfo kaa sɛ Yesu nyɛ sɛnkyerɛnne no, wanyɛ, na mmom ɔkaa biribi ma wɔhuu nea ɔma aduane. Ɔkaa sɛ: “Mese mo sɛ, ɛnyɛ Mose na ɔmaa mo paanoo a ɛfiri soro no, na mmom m’Agya na ɔma mo nokorɛ paanoo a ɛfiri soro no. Na Onyankopɔn paanoo ne deɛ ɔsiane firi soro na ɔma wiase nkwa no.” Wɔante nea ɔkae no ase, enti wɔsrɛɛ no sɛ: “Awurade, ma yɛn paanoo yi bi daa.” (Yohane 6:​32-34) Ná “paanoo” bɛn na Yesu reka ho asɛm?
Yesu kyerɛɛ mu sɛ: “Mene nkwa paanoo no. Deɛ ɔba me nkyɛn no, ɛkɔm renne no da, na deɛ ɔgye me die no, sukɔm renne no da. Nanso maka akyerɛ mo sɛ, moahu me nso monnye nni ara. . . . Mefiri soro aba sɛ merebɛyɛ deɛ ɔsomaa me no apɛdeɛ, ɛnyɛ me ara m’apɛdeɛ. Deɛ ɔsomaa me no apɛdeɛ ne sɛ meremma deɛ ɔde ama me no mu biara nyera, na mmom sɛ mɛnyane no da a ɛdi akyire no. Na m’Agya no apɛdeɛ ne sɛ obiara a ɔhunu Ɔba no na ɔgye no die no bɛnya daa nkwa.”​—Yohane 6:​35-​40.
Ɔka saa no, ɛmaa nkurɔfo no bo fui, na Yudafo no fii ase nwiinwii. Wɔante ase sɛ ɔkaa sɛ ɔno ne “paanoo a ɛsiane firii soro no.” (Yohane 6:​41) Wɔn deɛ, na wɔbu Yesu sɛ ɔyɛ ɔdasani kɛkɛ a ne papa ne ne maame fi Galilea kuro Nasaret mu. Enti wɔbisaa sɛ: “Ɛnyɛ Yesu, Yosef ba a yɛnim ne papa ne ne maame no nie?”​—Yohane 6:42.
Yesu nso kaa sɛ: “Monnyae anwiinwii. Obiara ntumi mma me nkyɛn gye sɛ Agya a ɔsomaa me no twe no; na mɛnyane no ɛda a ɛdi akyire no. Wɔatwerɛ no Adiyifoɔ no mu sɛ, ‘Yehowa bɛkyerɛkyerɛ wɔn nyinaa.’ Obiara a wate afiri Agya no nkyɛn na wasua no ba me nkyɛn. Ɛnyɛ sɛ obi ahunu Agya no, gye deɛ ɔfiri Onyankopɔn hɔ no; oyi na wahunu Agya no. Nokorɛ, nokorɛ, mese mo sɛ, Deɛ ɔgye die no wɔ daa nkwa.”​—Yohane 6:​43-​47; Yesaia 54:13.
Bere bi a Yesu ne Nikodemo kasae no, ɔka kyerɛɛ Nikodemo sɛ obi bɛnya daa nkwa a, gye sɛ ɔnya onipa Ba no mu gyidi. Ɔkaa sɛ: ‘Obiara a ɔkyerɛ [Onyankopɔn Ba a ɔwoo no korɔ no] mu gyidie no rensɛe na mmom ɔbɛnya daa nkwa.’ (Yohane 3:​15, 16) Saa bere yi deɛ ɛnyɛ nipa baako pɛ na na ɔne no rekasa; ɔne nnipadɔm na na ɛrekasa. Ɔma wɔhuu sɛ ɔno so na ɛnam a wɔbɛnya daa nkwa, na mana anaa paanoo a na ɛwɔ Galilea no deɛ, ɛrentumi mma wɔn nkwa. Ɛnde obi bɛyɛ dɛn anya daa nkwa? Yesu kaa bio sɛ: “Mene nkwa paanoo no.”​—Yohane 6:48.
Paanoo a ɛfiri soro ho asɛm no ansi hɔ ara. Bere a Yesu kɔɔ Kapernaum hyiadan mu kɔkyerɛkyerɛe no, ɛhɔ koraa na ɔkaa ho asɛm kɛse.
Yɛhwɛ nneɛma a Yesu yɛe a nkurɔfo no ara de wɔn ani hui no a, adɛn nti na na ntease nnim sɛ wɔrebisa sɛnkyerɛnne?
Bere a Yesu kaa sɛ ɔne “paanoo a ɛsiane firii soro no,” dɛn na Yudafo no yɛe?
Dɛn nti na paanoo a Yesu kaa ho asɛm no yɛ papa sen mana anaasɛ paanoo foforo biara?